Ammaaanka magaalada Galkacyo oo aad loo adkeeyey. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 11, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 11 – Waxaa si aad ah loo adkeeyey ammaanka magaalada Galkacyo dhowrkii maalmood ee ugu danbeeyey, iyadoo xilliga habeenkii ahna bandow lagu soo rogay.
Ciidanka Bileyska ayaa si aad ah u dhooban dhammaanba is-gooysyada magaalada dhaxdeeda ku yaalla habeen iyo maalinba, kuwaasi oo baaritaanno xooggan ku samaynayey gadiidka dadweynaha isla markaana ka hubinaya in wax hub ahi saaranyihiin, waxaana baaritaankooda intaasi u sii dheer hubinta Taargada iyo Canshuurda gaadiidka.
Intii ay socdeen howl-galada ammaanka lagu adkaynayo ee ka socda gudaha magaalada Galkacyo waxaa ciidanka bileysku ay xireen in ka badan 40 gaadiidka dadweynaha ah, oo lagu helay dhowr arrimood oo ay ka midyihiin Canshuur diidis, Taargo la?aan, bacaha madmadow ee beersalka, waxaana kuwo kale la qabtay iyagoo soconayey xilli aan munaasib ahayd.
Gaadiidkaasi oo dhammaantiis lagu xareeyey xarunta qaybta bileyska ee magaalada Galkacyo ayaa lagu soo rogay qaar ka mid ah ganaaxyo lacageed, oo jawaab u ah amarka dawladda ee ay jabiyeen kaas oo muujinayey dhammaanba waxyaabahaasi in ay mamnuucyihiin.
Dhanka kale magaalada Galkacyo waxay habeenkii sadexaad ku hoyatay bandow xooggan oo bilowda sideedda fiidnimo, kaasi oo hakad galiya isku socodka dadka iyo gaadiika wixii ka danbeeyey xilliga uu bilowdo.
Ma jirto cid wax ka soo gaareen bandowga ciidanka ammaanku ay sameeyaan xilliga habeenkii ah, mana jirto wax rasaas ah oo ciidanku ay adeegsadeen dhowrkii habeen ee ay bandowga ku howllanaayeen, taas oo in badan soo jiidatay aragtida dadweynaha magaalada Galkacyo oo markii hore ka cabsi qabay in khasaarooyin ka dhashaan.
5 nin oo Bakistaaniyiin tabliiq ah oo lagu dilay masaajid ku yaalla Galkacyo. [Akhris …]